Fandraisana | Bezzia (Pejy 3)
Hevitra handaminana ny tranonao amin'ny tabilao Skadis avy any Ikea
Skadis dia takela-by misy amin'ny katala Ikea hatramin'ny habe telo isan-karazany. Lahatsoratra afaka ...
Ahoana ny fanatsarana ny sakafon-saka
Ny fanatsarana ny sakafon-saka dia tsy asa sarotra. Mila manao dingana tsara vitsivitsy fotsiny isika mba hahasambatra ny biby fiompintsika.
Karazana faucet ho an'ny lakozia, iza no hofidiana?
Tsy mandeha toa ny teo aloha ny paompinao? Hanova azy ve ianao? Amin'izao fotoana izao dia maro ny karazana faucet ao an-dakozia. Manampy anao izahay hisafidy izay mety indrindra.
Ahoana ny fomba hanafenana mora foana ny tariby
Ny fanafenana ireo tariby dia zavatra tadiavin'ny ankamaroan'ny maro, hanome baiko ny efitrano tsirairay. Te hahita ireo hevitra tsotra indrindra ve ianao?
Legioma sy anana 5 azonao ambolena eo an-davaranganao
Rehefa avy nanoro anao ny lakilen'ny famoronana zaridaina eo amin'ny lavarangana izahay dia zarainay aminao ny legioma dimy azonao hambolena ao.
Zavatra mankahala be ny saka!
Ny saka dia mankahala zavatra maro ary angamba, ny sasany amin'izy ireo dia ataonao isan'andro. Jereo ny fialamboly rehetra amin'ireto felines ireto.
Ireo mpikarakara kojakoja ho an'ny mpantsaka an-dakozia
Ny mpikarakara kojakoja dia mamela antsika handamina ireo vatasarihana lakozia ka amin'izay dia tsy hanary fotoana be mitady fitaovana manokana.
Fanalahidy hampiofanana alika
Ny fampiofanana alika dia mety ho sarotra kokoa noho ny fahenoana azy. Noho izany dia mila fanalahidy maromaro sy faharetana be amin'ny fampiofanana tsirairay izahay.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny sezanao lamba
Raha te hahafantatra ny fomba fanadiovana ny sezanao lamba ianao mba ho tsara kokoa ny halavany dia henoy ny torohevitray anio.
Mania sy aretina matetika amin'ny alika
Betsaka ny mania sy ny aretina mety ho hitantsika amin'ny alika. Fantatrao ve hoe iza no tena matetika sy ny dikany?
Hevitra vitsivitsy handaminana ny fitahirizanao zava-manitra
Tianao ve ny mahandro amin'ny zava-manitra? Raha izany dia mety ho azo ampiharina aminao ireo hevitra handaminana ny tavoanao zava-manitra ireo.
Entana avy amin'ny fanangonana lakozia an-dakozia Zara Home izay hovidinay
Efa nahita ny fanangonana lakozia ao an-dakozia Zara Home ve ianao? Ahitana kojakojan-dakozia, fitaovana, lamba ary izay rehetra azonao atao ...
Hummus - inona izany? Ahoana ny fomba namoronana azy?
Inona ny atao hoe humus ary ahoana ny famokarana azy? Ity zezika biolojika ity dia manome otrikaina ho an'ny zavamaniry antsika ary ny famokarana ao an-trano dia manampy amin'ny fampihenana ny fako.
Ny sconce amin'ny rindrina sy ny endri-javatra na tombony lehibe ananany
Ny jiro amin'ny rindrina dia manana andiana tombony na toetra tsy maintsy fantarintsika tsara. Andininy haingon-trano ho ao an-tsaina foana.
Kaontenera 5 hanamasoana ara-dalàna ny sakafo
Rehefa avy nasehoko anao ny lakilen'ny fanamainana mangatsiaka araka ny tokony ho izy, dia mizara kaontenera 5 aminao izahay anio.
Ahoana ny fomba fanadiovana alimo, ny toro-hevitra sy ny tetika tsara indrindra
Hanadio ny alimo, na an-dakozia na any amin'ny fitaovana, dia manana torohevitra tsara indrindra izahay amin'ny endrika fanafody azonao ampiasaina amin'ny fomba tsotra.
Fanalahidin'ny hatsiaka sy ny fanalefahana
Ny fanala mangatsiaka dia ahafahantsika manitatra ny androm-piainan'ny sakafo sy misoroka ny fako. Fa fantatsika ve ny lakilen'ny fanamendrehana sy ny fanalefahana araka ny tokony ho izy?
Mpanompatra an-trano: aiza no hividianana azy ireo? Ahoana no fanamboarana azy ireo?
Ny fitoeram-bokatra ho an'ny zezika eto an-toerana dia azo apetraka amin'ny toerana kely ary manampy antsika hanidy ny tsingerin'ny fako biolojika vokarintsika ao an-trano.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny rindrina fotsy malama ao an-trano
Ao Bezzia izahay dia mizara tetika tsotra aminao hanadiovana ny rindrina fotsy malama ary hampiseho azy ireo ho vaovao nefa tsy mila mandoko azy ireo.
Mandehandeha amin'ny biby, ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra amin'ny fialantsasatra tonga lafatra
Raha mandeha vakansy ianao ary handeha hiaraka amin'ny biby, dia tsy maintsy fantatrao ny fepetra takiana lehibe indrindra hankafizanao ny ankohonanao.
Torohevitra hampangatsiaka ny trano amin'ny fahavaratra
Manome anao torohevitra vitsivitsy sy hevitra tsotra izahay hampangatsiaka ny trano amin'ny fahavaratra, zavatra tena ilaina mba hankafizanao ny rivo-piainana tsara.
Torohevitra azo ampiasaina mba hitsimbinana angovo amin'ity fahavaratra ity
Ny fitsitsiana angovo amin'ity fahavaratra ity dia iray amin'ireo dingana tsy maintsy raisintsika mba tsy hiakatra tampoka ny volantsika. Raiso amin'ireto torohevitra mahasoa ireto
Lakile 6 hiatrehana ny fanavaozana ny tranonao
Mila fanavaozana ve ny tranonao? Ny fananana asa sy mpiasa ao an-trano dia aretina ho an'ny rehetra. Tsy misy olona afaka manome toky antsika, ...
Lakile fanadiovana sy fitazonana ny kidoro
Ny fikojakojana tsara ny kidoro dia tsy vitan'ny hoe hanome fialan-tsasatra tsara kokoa ho antsika, fa hanampy antsika hitazona azy io amin'ny toe-piainana mety tsara ihany koa.
Composting an-tanàn-dehibe: araraoty ny fako biolojika
Ny zezika an-tanàn-dehibe, ankoatry ny fanampiana anay hampihena ny fako biolojika vokarina ao an-trano, dia mitondra anjara biriky amin'ny famelomana ireo zavamaniry.
Fetsy hanitatra ny ain'ny voninkazo tapaka
Te hahafantatra tetika vitsivitsy hanitarana ny ain'ny voninkazo tapaka ve ianao? Miaraka amin'izy ireo ny fehezam-boninkazo dia hanome loko ny tranonao mandritra ny fotoana lava kokoa.
Torohevitra hankafizanao ny fahavaratra miaraka amin'ny biby fiompinao
Lazainay aminao ny fomba hankafizanao ny fahavaratra miaraka amin'ny biby fiompinao, satria mila fikarakarana manokana ny biby fiompy amin'ity vanim-potoana ity.
Ny lozam-pifamoivoizana mahazatra ao an-trano
Ny lozam-pifamoivoizana fahita matetika ao an-trano dia mety miovaova nefa samy hafa be pitsiny avokoa. Tsy maintsy mitandrina isika.
Tetika 5 hanafoanana ny fofona ratsy ao an-trano
Ny fofona ratsy dia mahafinaritra tokoa, saingy tsy sarotra ny manala azy amin'ny akora mahazatra. Ianaro ireto tetika 5 ireto.
Fihetsika tsotra hampihenana ny fanjifana plastika
Tamin'ny herinandro lasa izahay dia nizara taminay ny angon-drakitra Erostat izay nilaza fa ny Espaniola tsirairay dia mamoaka fako 464 kilao ...
Torohevitra telo amin'ny fisafidianana ny latabatra
Ianao ve mieritreritra ny hanavao ny latabatra? Betsaka ny safidy eny an-tsena ka mety ho sarotra ny misafidy iray raha tsy misy ireto torohevitra ireto.
Tolo-kevitra 5 hampihenana ny fako ao an-trano
Ny Espaniôla tsirairay avy dia mamokatra fako 464 kilao isan-taona raha ny filazan'ny Eurostat. Betsaka, sa tsy izany? Te hahafantatra ny fomba hanombohana mampihena ny fako ao an-tranonao ve ianao?
Ahoana ny fomba fanesorana sokay amin'ny rano
Ny fanesorana sokay amin'ny rano dia zavatra mampatahotra antsika matetika. Noho izany, avelanay ianao miaraka amina andianà vahaolana tsotra kokoa eo amin'ny rantsan-tananao.
Zavamaniry manitra 5 azonao ambolena ao anaty trano
Azo atao ve ny mamboly zavamaniry manitra ao an-trano? Ao Bezzia izahay dia milaza aminao hoe inona ny fepetra ahafahana manao izany sy izay zavamaniry tokony hofidinao.
Tavoahangy plastika, vera na vy azo ampiasaina indray, iza no hofidina?
Ny tavoahangy azo ampiasaina dia safidy tsara raha te hampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana ianao. Inona no safidy hafa? Iza no azo ampiharina kokoa?
Fetsy mora handaminana ny trano
Manome tetika tsotra vitsivitsy izahay handaminana ny trano miaraka amin'ny fanaka azo ampiasaina sy toro-hevitra mora harahina.
Hevitra 4 handaminana ny fitafianao
Sarotra aminao ve ny mitazona ny lalimoanao? Ireo entana ireo dia afaka manampy anao hampitombo ny toerana fitahirizana sy handamina ny efi-tranonao.
Fanalahidy hikarakarana gorodona hazo
Ny gorodona hazo dia mahazatra ao an-tranontsika, saingy haintsika ve ny mikarakara azy ireo tsara? Manome anao lakile fito izahay anio ao Bezzia.
Avy amin'ny zaridaina ka hatrany an-tranonao: sobika ara-potoana
Hiresaka momba ny tombony azo amin'ny fihinanana vokatra avy amin'ny harona amin'ny fizaran-taona isika, miaraka amin'ny voankazo sy legioma mahasalama izay mahasoa ny tontolo iainana.
Ireo sakafo azon'ny saka fihinina
Betsaka ny sakafo azon'ny saka atao, nefa tsy voatery ho sakafony manokana. Fa eny, miaraka amina andiana fetra foana.
Zavamaniry miakatra 4 hametahana rindrina sy tarehy
Mpiara-miakatra ny zavamaniry dia mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny rindrina sy ny endrika any an-tranonay, ka manova ny endrika ivelany.
Torohevitra fototra momba ny dia an-tongotra miaraka amin'ny biby fiompy
Avelanay miaraka amina andiana toro-hevitra fototra momba ny dia an-tongotra miaraka amin'ny biby fiompy ianao. Dingana izay tsy maintsy raisintsika alohan'ny diantsika.
Vokatra 5 handaminana ny arimoaran-fandroana
Ao amin'ny Bezzia dia asehonay anao anio ireo vokatra 5 inoanay fa afaka manampy anao hitazona filaminana ao anaty lalimoanao fandroana. Efa mampiasa ve ianao?
Maninona ny saka no mihinana fasika: antony mahazatra indrindra
Raha tsikaritranao fa mihinana ny fasika avy ao anaty boaty ny saka dia mety ho noho ny andianà antony izay tsy maintsy fantatrao ny manasitrana azy ireo.
Fomba 5 hitondrana lohataona ao an-tranonao
Tonga ny lohataona ary miaraka aminy, ny faniriana hanao fanovana madinidinika ao an-tranonay izay mitondra fitoniana amin'ny ...
Ny fahalianan'ny saka izay azo antoka fa tsy fantatrao
Ny fahalianan'ny saka izay tokony ho fantatsika dia maro sy isan-karazany. Satria amin'ity fomba ity dia afaka mahatakatra zavatra maro hafa manodidina azy isika.
Mpikarakara rindrina kanvas 4
Ny latabatra sasany lasa izay, rehefa naneho taminao safidy hafa mba hitazomana ny volan'ny birao, dia niresaka an'io izahay ...
Fahakiviana amin'ny saka: antony mahakivy ny biby
Ny famoizam-po amin'ny saka dia zavatra mahazatra kokoa noho ny tsy azontsika an-tsaina. Noho izany, tsy maintsy manatrika ireo antony isika ary manandrana misoroka sy mamaha azy ireo.
Vahaolana fanadiovana voajanahary 3 ho an'ny lakozianao
Mitady vahaolana fanadiovana voajanahary hanadiovana ny takelaka fanapahanao, ny vy vy, na ho takelaka fanasana vilia?
Tavoara fitaratra izay hahatonga ny pantry ho tsara tarehy sy mandamina kokoa
Ireo siny fitaratra izay arosonay anio dia tsy hanampy anao handamina ny pantry fotsiny, fa ho haingon-trano be koa napetraka ao an-dakozanao.
Andriambavin'ny alina, ilay voninkazo izay hitondra fifaliana amin'ny lavarangana misy anao
Ny Lady of the Night dia zavamaniry malaza amin'ny hanitra entiny amin'ny alina. Ianaro eto ny zava-drehetra momba ity kirihitra mahafinaritra ity.
Fahadisoana tsy tokony hataonao amin'ny famolavolana lakozia
Ny lesoka amin'ny famolavolana lakozia dia tena mahazatra. Noho izany, ampahafantarinay ireo mahazatra indrindra mba hahafahanao manova azy ireo mialoha ny fotoana.
Radiatera lamba famafana handefasana ny fandroana
Rehefa misafidy ny rafi-panafanana mety indrindra amin'ny trano fidiovana dia ny lalamby famaohana mafana no tianao indrindra.
Farafara fandriana, izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hividianana
Safidy tonga lafatra ny fandriana fandriana rehefa manana toerana voafetra ao an-trano isika. Jereo izay rehetra ilainao alohan'ny hividianana.
Lakozia Aquamarine izay mitaona ny fandriam-pahalemana sy ny tsiro tsara
Ny lakozia Aquamarine dia azo ankafizina amin'ny fikolokoloana volo na amin'ny famaranana maoderina kokoa. Aza adino ireo hevitra ireo!
Torohevitra hanantonana akanjo ary hialana amin'ny ketrona
Ny akanjo mihantona dia mahavonjy antsika amin'ny fotoana fanodinana ary manampy antsika hitazona ireo akanjo amin'ny toe-javatra mety indrindra haharitra kokoa.
Ny Shar Pei dia karazany mitaky be loatra noho ny fahita amin'ny palitao. Jereo ny tantarany sy ny nahatonga azy ho alika ankehitriny.
Lakozia amerikana, ny tombony sy ny fatiantoka entiny
Ny lakozia amerikana dia manana tombony marobe nefa misy fatiantoka hafa koa tokony ho fantatrao sy raisina an-tanana.
Efa nieritreritra ny hametraka lakozia ivelany ve ianao?
Efa nieritreritra ny hametraka lakozia ivelany ve ianao? Izy io, tsy isalasalana, dia hevitra tsara hanararaotana ny habaka ivelany amin'ny fahavaratra.
Aiza no avela baoty mando rehefa mody?
Ny fanesorana ny baoty mando rehefa tonga any an-trano ianao mba hisorohana ny fahazoana loto ao an-tranonao dia tokony ho zavatra ilaina tokoa. Fantatrao ve ny toerana avelan'izy ireo?
Lazainay aminao ny fomba hahafantarana ny filaharan'ny pine kesika mampidi-doza hisorohana azy, satria biby manapoizina ho an'ny biby fiompintsika izany.
Araraoty tsara ny lakozia kely lava
Ny lakozia kely elongated dia afaka manome ny tenany be dia be, raha haintsika ny fomba hahazoana tombony azo avy amin'izany. Torohevitra kely sy azo ampiharina
Hevitra 4 hanamafisana ny fitehirizana ao amin'ny trano fidiovana kely
Vokatra fanadiovana, servieta, taratasy fidiovana, makiazy ... Vokatra mila vahaolana fitehirizana azo ampiharina ...
Labozia mitsingevana mba hanitry ny fofona ao an-trano
Lazainay aminao ny fomba fanaovana labozia mitsingevana mba hanitry ny fonao. Andininy haingon-trano izay mety tsara amin'ny efi-trano rehetra.
Fetsy mba tsy hanoratan'ny saka ny fanaka
Mba tsy hanakorontana ny fanaka ny saka dia misy andian-tetika foana izay azontsika atao mora foana. Halahelo azy ireo ve ianao ?.
Boaty mpikarakara hanafina tariby
Ny boaty fitantanana tariby dia hanampy amin'ny fitazonana tariby sy korontana tariby ao amin'ny efitranonao, fianarana na efitrano fatorianao.
Ahoana no hikarakarana ny biby fiompy mandritra ny ririnina
Ny fikarakarana ny biby mandritra ny ririnina dia asa marefo kokoa. Tokony ho fantatsika fa mijaly faran'izay kely araka izay azo atao izy ireo amin'ny maripana ambany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny hamandoana amin'ny alàlan'ny fanondranana
Na dia indraindray aza, ny fahalainana dia ateraky ny olan'ny rafitra, misy andiana hetsika izay afaka manampy antsika hisoroka izany. Lazainay aminao.
Tombontsoa azo amin'ny fananana biby fiompy ho an'ny fahasalamantsika ara-tsaina
Ny fahasalamanantsika ara-tsaina dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fiompiana biby. Satria misy tombontsoa marobe omen'ny biby antsika ary tsy maintsy ho hitanao.
Entana 4 handaminana ny vata fampangatsiahana
Te hampitsahatra ny korontana ao anaty vata fampangatsiahana ve ianao? Tao Bezzia izahay dia nanangona lahatsoratra efatra izay hanampy anao handamina ny vata fampangatsiahana anao.
Torohevitra momba ny fisafidianana satroka fitrandrahana
Betsaka ny lafin-javatra izay tsy maintsy raisina rehefa misafidy ny kapaoty fitrandrahana mety ho an'ny lakozia. Lazainay aminao.
Hamboary tsara ny tranonao amin'ny varotra
Ny varotra dia natomboka ary maneho fotoana lehibe hanavaozana sy hamatsiana fihenam-bidy lehibe ho an'ny tranontsika.
Zavatra ikea 5 izay mandray anjara amin'ny filaminana
Androany dia hitantsika ao amin'ny lahatsoratra Bezzia 5 Ikea izay afaka mandray anjara amin'ny filaminana sy ny fandaminana ny tranonao. Vonona ve ianao?
Fetsy hanesorana menaka ao an-dakozia
Manome tetika mahaliana anao izahay hahafahanao manala menaka avy ao an-dakozia, iray amin'ireo olana lehibe momba ny fahadiovana amin'ity faritra ity.
Ny fidiovana tsara indrindra ho an'ny alikanao mandritra ny ririnina
Ny fahadiovan'ny alikanao dia zava-dehibe amin'ny fikarakarany sy ny fahasalamany. Saingy amin'ny ririnina dia tsy tianay ny hahitanareo aretina isan-karazany ka araho ireto dingana ireto.
Lakile 4 hanana ny fety am-pilaminana
Anio dia manome anao lakilasy efatra ianao mba ho tafavoaka velona amin'ny fihaonan'ny fianakaviana manaraka ary hanao soa amam-pilaminana. Ampiharo izy ireo amin'ity Noely ity.
Fepetra takiana mba hananana biby fiompy
Raha te hanana biby dia mila manana fepetra takiana. Satria ny fanomezana ataonao anio dia azo ilaozana rahampitso. Mieritrereta tsara !.
Fanangonana fofona any Equivalenza
Atorinay anao ny fanangonana fofona manitra vaovao ho an'ny tranon'ilay orinasa Equivalenza, miaraka amin'ny mikado, labozia misy fofona ary menaka tsy voavahan-drano.
Ahoana ny fomba fanaovana baolina Krismasy
Ny baozy noely dia azo atao haingana ao an-trano ihany koa. Amin'ny fitaovana vitsivitsy, ao anatin'ny minitra vitsy dia hanana ny haingon-tranoo indrindra ianao.
4 kojakoja ilaina amin'ny koveta
Efa fantatrao ve izay tokony hatao mba hitazomana ny toerana hilentehany hadio sy madio? Ao Bezzia dia manolotra anao kojakoja miisa 5 izahay izay hanampy anao
Tombony sy fatiantoka entin'ny torimaso miaraka amin'ny biby
Ny torimaso miaraka amin'ny biby dia zavatra iray izay ataon'ny maro amintsika. Saingy tsara sa ny mifanohitra amin'izay? Jereo ny tombony sy ny fatiantoka.
Fetsy hanao shopping Natal
Vonona ny amin'ny Noely? Raha te-ho tafavoaka velona amin'ny maelstrom fiantsenana krismasy ianao dia vakio tsara ny toro-hevitray.
Ahoana no hitazomana ny fahadiovana ao anaty trano misy biby fiompy
Lazainay aminao ny fomba hitandroana ny fahadiovana ao an-trano raha manana biby fiompy izahay, satria misy fika azo ampiasaina ao an-trano.
Ny fahalianan'ny saka persiana
Ny saka persiana dia iray amin'ny olona tiana indrindra sy ankafizina indrindra. Manana hatsaran-tarehy sy kanto ary filaminana milamina izy io. Aza adino ny fahalianana maro hafa!
Zavatra 5 tokony hosaintsainin'ny mpampiantrano rehetra alohan'ny Krismasy
Handray namana sy fianakaviana any an-trano ve ianao amin'ny Noely? Amin'ny maha mpampiantrano anao dia misy zavatra vitsivitsy tokony hieritreretana mialoha. Iza?
Hevitra hankafizana fofona mahafinaritra ao an-trano
Manome anao hevitra izahay momba ny fomba hahazoana fofona manitra be ao an-trano, miaraka amin'ny kojakoja samihafa, manomboka amin'ny emboka manitra ka hatrany amin'ny labozia manitra.
Wardrobes ho an'ny efitrano azo ampiharina
Manana efitrano malalaka ve ianao? Mahasoa anao ve izany? Raha tsy izany dia manao zavatra tsy mety ianao. Topazo maso ny hevitray ary mahazoa aingam-panahy avy amin'ireo fitafiana ireo.
Torohevitra hikarakarana ny volon'ondry
Ao Bezzia izahay dia te-hizara torohevitra vitsivitsy hanampy anao hikarakara tsara ny volon'ondry, mba haharitra kokoa.
Araraoty ny varavarana andriamby an'ny vata fampangatsiahana anao
Betsaka ny kojakoja andriamby azonao apetraka amin'ny varavaran'ny vata fampangatsiahana mba hampitomboana ny fiasan'ny lakozia. Jereo izy ireo!
Ahoana ny fomba hisafidianana ny robot vacuum cleaner tsara indrindra
Rehefa misafidy mpanadio banga robot tsara ianao dia mila fampitahana modely ary koa ny toetrany sy ny tombony ananany.
Torohevitra 3 handaminana ny vata fampangatsiahana anao
Ao Bezzia dia manome anao torohevitra telo izahay hahatonga ny ankamaroan'ny toerana misy ao amin'ny vata fampangatsiahana anao. Ataovy mpiara-miasa amin'ny sakafo ara-pahasalamana izy io.
Mandamina ny raharaha ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviana
Ny fampandraisana anjara ny mpianakavy rehetra amin'ny raharaha ao an-trano dia mampihena ny adin-tsaina ao an-trano. Te hahafantatra ny fomba hanendasana azy ve ianao?
Mikoriana metatra ary mikoriana fetra hitsitsiana rano
Ny metatra mikoriana sy ny fetra mikoriana dia vokatra roa izay manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana rano na fitsitsiana rano ao an-trano. Mahalalà azy ireo!
Ny tetika fanadiovana tsara indrindra ho an'ny tranonao
Izahay dia mamela anao amin'ny tetika fanadiovana tsara indrindra ho an'ny tranonao, izay tsy maintsy ampiharinao. Fetsy tonga lafatra ho an'ny isan'andro isan'andro.
Cooking batch: manangona fotoana ao an-dakozia
Ny fandrahoan-tsakafo dia fomba iray manampy anao hanary fotoana sy hery amin'ny fanomanana ny sakafonao isan-kerinandro. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Angano diso momba ny saka izay tokony hohadinoinao
Mampiseho anao angano maromaro momba ny saka izay tokony adino ianao. Zavatra izay ninoantsika hatrizay nefa diso be.
Fomba 3 hametahana ambainy eo amin'ny varavarankelinao
Misy fomba samihafa hametrahana ny lambam-baravarana amin'ny varavarankely na varavaranao. Ao amin'ny Bezzia dia asehonay anao ireo rafitra fifatorana 3 mahazatra indrindra.
Drafitra fandrosoana isaky ny dingana ho an'ny fianakaviana
Ny teti-bolan'ny fianakaviana dia fitaovana ilaina amin'ny fifehezana ny toekarem-pianakaviana. Atorinay anao ny fomba hahazoana iray.
Ny fitohanana amin'ny saka
Fantaro ny soritr'aretina sy ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fitohanana amin'ny saka. Ho hitanao ny, ny biby fiompinao dia hiverina hitovy amin'ny mahazatra hatrany.
Fetsy tokony ho fantatrao raha manana biby ao an-trano ianao
Izahay dia manambara andiam-pitaka izay mila fantatrao raha manana biby fiompy ao an-trano ianao. Hevitra tsotra azo ampiharina isan'andro.
Fampiasana soda fanaova amin'ny fanadiovana ny trano
Betsaka ny azo ampiasaina amin'ny fanaova soda ao an-trano. Izy io dia vokatra marobe sy ara-toekarena indrindra ho an'ny asa fanadiovana.
Mpanamboatra rindrina DIY 3 ho an'ny latabatrao
Ao Bezzia dia manolotra mpikarakara rindrina DIY 3 ho an'ny latabatrao izahay. Tetikasa tsotra hitandrina ny faritry ny asanao madio.
Torohevitra momba ny fisafidianana ny valim-panangonana mety
Eny an-tsena dia misy sary an-tsehatra misy toetra samy hafa. Te hahafantatra ve ianao fa ny sary an-tsaina mety indrindra amin'ny tranonao?
Sakafo izay tsy tokony hohanin'ny hamsters
Jereo hoe inona avy ireo sakafo tsy tokony hohanin'ny hamsters satria mety hanimba tena amin'ny fahasalamana izany. Tsy maintsy fehezintsika, ary betsaka, izay nohaniny!
Fanamboarana rivotra voajanahary 3 ho an'ny tranonao
Izahay ao Bezzia dia omenay anao ny lakileny hanomanana freshener-drivotra voajanahary 3 namboarina hamonoana ny fofona manitra ao an-tranonao.
Equivalenza Drop fofona manaparitaka
Ny diffusion an'ny Equivalenza Drop dia manolotra fofona malefaka sy mahafinaritra, vokany mando ary fialam-boly betsaka.
Ilaina amin'ny famoronana foibem-baikoam-pianakaviana
Ao Bezzia izahay dia te hanampy amin'ny fanamorana ny fianaran'ny fianankaviana isan'andro sy ho voalamina kokoa. Ahoana? Mampiseho aminao ny lakilen'ny ivon-dohan'ny fianakaviana.
Tombony lehibe azo amin'ny alika
Aza adino ny tombontsoa lehibe entin'ny alika amintsika. Raha tsy misy fisalasalana, dia tsy ho te hanana tsy misy volony eo anilanao intsony ianao.
Hevitra momba ny fitehirizana ny tabila-by
Voatazona ao ambadiky ny varavarana na eo ambanin'ny farafara ve ny tabilao? Androany izahay mitondra hevitra aminao hahafahanay manangona azy amin'ny fomba milamina sy azo ampiharina.
Fomba tokony hampiseho fitiavana ny saka
Jereo hoe inona ireo endrika na fihetsika tsy maintsy asehon'ny saka ny fitiavany anao. Betsaka. amin'ireo voalaza ireo, ataovy ny biby fiompinao ?.
Solony kitapo plastika amin'ny fividiananao
Aty Bezzia dia manolotra safidy hafa ianao anio hisorohana harona plastika rehefa miantsena ka miloka amin'ny fanjifana tompon'andraikitra kokoa.
Tandremo sao ho mafana ny saka
Avelanay miaraka amina toro-hevitra maromaro ianao mba tsy hafanan'ny sakao amin'ny fahavaratra. Karakarao izy ireo ary arovy amin'ny hafanana be amin'ny vanin-taona mafana
Ahoana ny fomba fanadiovana ny hood an-dakozia
Ny kapoakan'ny mpanala dia mitsoka ny setroka ary manangona menaka. Ny fanadiovana ny hood dia tsy maintsy atao lohalaharana hisorohana ny olana.
Ho avy ny fialantsasatra, aiza no hamelako ny saka?
Te hiaraka amin'ny saka foana izahay, fa ny fahatongavan'ireo fialantsasatra dia mahatonga anay handinika safidy hafa tsara ho an'ny rehetra.
Fitaovana 5 handaminana tsara ny arimoaronao
Misy kojakoja izay afaka manampy anao handamina tsara ny fitafianao. Te hahafantatra azy ireo ve ianao ary aiza no hividianana azy ireo?
Ranomasina ho an'ny alika any Espana, mankafy ny fahavaratra miaraka amin'izy ireo!
Aza adino ity safidin'ny morontsiraka ity ho an'ny alika izay ho hitantsika manerana ny saikinosy. Toerana hahafinaritra miaraka amin'ny biby fiompy.
Harato moka: Arovy ny tranonao amin'ny bibikely
Ny harato moka dia hisorohana ny fidiran'ny moka amin'ny tranonao ary hahafahanao miditra amin'ny rivotra amin'ny alina amin'ny fiadan-tsaina tanteraka. Fantaro ny karazany rehetra.
Ahoana ny fomba avela irery ny biby ao an-trano nefa tsy mitebiteby
Matetika ny fanahiana manasaraka rehefa avela irery mandritra ny ora maro ny biby fiompy. Ity olana ity dia azo vahana amin'ny fomba maro.
Afaka mamantatra ny fihetsem-pon'ny olombelona ny alika
Raha mbola nisy dia mazava. Noho ny fandinihana farany natao dia afaka mamantatra ny fihetsem-pon'olombelona ny alika.
Kit ny fitsangatsanganana ifotony: inona no tsy ho hita?
Mikasa ny ho avy tsy ho ela ve ianao? Mety nanontany tena ianao avy eo hoe inona no hampidirina ao amin'ny kitapo fitsangatsanganana. Manolotra tari-dalana aminao izahay ao Bezzia.
Ahoana ny fomba hamahanana tsara ny saka antsika
Raha manana fisalasalana ianao amin'ny amin'ny fomba hamahanana tsara ny saka saka, dia aza hadino ny torohevitra nasehonay anao dia marina ny anao.
Ahoana ny fomba hanararaotana ny lalimoara an-dakozia
Asehonay aminao ny vahaolana fitehirizana samihafa izay ahafahanao manatsara ny fahafaha-manaonao eo am-paosin'ny lakozia eo an-dakozia.
Fa maninona ny alika no mifanenjika amin'ny rambony
Mety hieritreritra isika fa hahafinaritra izany, fa raha mifanenjika ny rambon'ny tsirairay ny alika dia mety miafina ny aretina somary sarotra.
Antony 5 hividianana amin'ny super online
Betsaka ny antony anaovana fivarotana enta-madinika amin'ny Internet. Anio dia asehonay anao ireo 5 manandanja indrindra. Azonao an-tsaina ve izany?
Fomba fanadiovana ny lafaoro, hevitra azo ampiharina
Fantaro ny fomba fanadiovana ny lafaoro amin'ny alalany ao an-tranonao, satria amin'izao fotoana izao dia manana vokatra samihafa ianao, fa koa ny safidy voajanahary.
Antony manatsara ny fahasalamana ny biby fiompy
Raha tianao ny biby, mitondra vaovao tsara izahay. Manatsara ny fahasalamana tokoa ny biby. Jereo hoe inona no azon'izy ireo atao ho anao!
Ahoana ny fanantonana fitaratra eo amin'ny rindrina
Misy fomba samihafa hanantonana na hanamboarana fitaratra eo amin'ny rindrina. Manome anao ny lakilen'ny tsirairay amin'izy ireo izahay ao Bezzia hahafahanao manao izany amin'ny tenanao.
Hevitra 3 hanadio ny garazanao
Manangona zavatra be dia be ao amin'ny garazy izahay, fa tsy ataontsika milamina foana. Androany dia manolotra rafitra 3 izahay handaminana sy hametrahana filaminana ao amin'ny garazy.
Fikarakarana fototra ho an'ny alika voadio
Ny alika sterilized dia mila fikarakarana fototra. Ho fanampin'ny fanararaotana, izay tsy afaka tsy eo mihitsy, tokony ho fantatsika kely izany. Raha mbola tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana dia avelanay miaraka aminao ireo torohevitra tsara indrindra ampiharinao. Manomboha haingana araka izay tratra!
Ny boaty Fitaovana Fampiasa An-trano
Ny fananana boaty fanodinana fototra ao an-trano dia afaka mamonjy anao amin'ny fihazakazahana mihoatra ny iray. Atorinay anao izay fitaovana tsy tokony hanjavona ao.
Mikarakara mba hiarovana ny biby fiompinao amin'ny hafanana
Betsaka ny fikarakarana tsy maintsy harahinao mba hiarovana ny biby fiompinao amin'ny hafanana. Ny sasany dia mety ho tena fototra nefa ilaina ihany koa ary tsy tokony hohadinointsika. Mila toerana sy rano mangatsiaka ary dingana vitsivitsy hafa izy ireo hialana amin'ny famelezana hafanana tsy ilaina.
Famitahana ny valizy tonga lafatra
Manana fitsangatsanganana mandritra ny volana vitsivitsy ve ianao? Raha izany ary te hitondra valizy maivana ianao dia ireto misy torohevitra vitsivitsy hanamboarana ilay valizy tonga lafatra.
Torohevitra fototra hitrandrahana saka very
Ny fananganana saka mania dia zavatra efa nataontsika im-betsaka na efa tonga ao an-tsaintsika izany. Fomba iray ahafahana manolotra fiainana tsara kokoa ho an'ny biby izay tsy manana izany tombony izany. Ka anio, izahay dia mijanona miaraka amin'ireo torohevitra tokony ho fantatrao raha hanome an'io zazakely kely mahantra io fotoana lehibe ianao.
Zero Waste sa Zero Waste, aiza no hanombohana?
Ny hetsika Zero Waste na Zero Waste dia manasa antsika hanao fanjifana tompon'andraikitra bebe kokoa mba tsy hiteraka fako ao an-tranontsika.
Fomba fanadiovana vy tsy misy fangarony
Ao Bezzia dia lazainay aminao anio ny fomba fanadiovana vy tsy misy fangarony miaraka amina modely vita amin'ny trano amin'ny fomba tsotra. Ho madio sy hamiratra izy io.
Ahoana ny fomba hanakanana ny vodin-tranonao
Ny tsy fanakanana ny vovo-drano dia iray amin'ireo olana fahita matetika hitranga eto an-dakozia, noho izany dia tsy maintsy haintsika ny fomba fanaovana azy.
Hevitra 4 handaminana cutlery ao an-dakozia
Ao Bezzia izahay dia mampiseho aminao hevitra efatra handaminana kojakoja ao an-dakozia. Tsy misy intsony ny fikororohana azy rehetra anaty vatasarihana. Makà!
Ny fofona irin'ny saka anao
Misy fofona maro izay tian'ny saka ary, angamba, tsy hitanao akory. Satria manana fofona maimbo be ny felines ary noho izany dia tsy manadino ny fofona iray manodidina azy ireo izy ireo. Noho izany, androany dia manonona ireo izay mahalasa adala azy ireo isika.
Torohevitra hitandrina ny efijery fisotro madio
Miaraka amin'ireo torohevitra na tetika 4 hitantsika ho anao anio ao Bezzia dia hanana efijery fandroana madio foana ianao, tsy misy sokay na bobongolo, toy ny andro voalohany ihany!
Sakafo 5 tsy tokony homena ny alikanao
Na dia manimba azy ireo betsaka aza isika, misy zavatra tsy maintsy hialantsika mba tsy hijaly ny fahasalamany. Noho izany, asehonay anao ny sakafo izay tsy tokony homena ny alikanao. Amin'izany no hikarakarantsika azy ireo bebe kokoa noho ny mahazatra antsika.
Antony 5 hividianana fanamainana
Efa nieritreritra ny hividy fanamainana fanamainana ve ianao nefa tsy afaka mamorona ny sainao? Ao Bezzia izahay dia manome anao antony 5 handalovana handingana.
Ny loko rindrina izay tsy miala amin'ny lamaody mihitsy
Raha mieritreritra manampy loko kely amin'ny efitranonao ianao dia fotoana mety izao. Lazainay aminao hoe inona avy ireo loko ho an'ny rindrina izay tsy miala amin'ny lamaody velively. Ireo feo fototra sy ireo feo mavitrika kokoa izay azonao raisina rehefa mifidy azy ireo ianao.
Mampiditra saka vaovao amin'ny fianakaviana ve ianao?
Haka saka faharoa ve ianao? Raha izany, ireto toro lalana manaraka ireto dia afaka manampy anao hanana fifandraisana tsara amin'ilay efa anananao.
Lakozia misy nosy, ny fomba hanararaotana azy ireo
Ny lakozian'ny nosy dia iray amin'ireo hevitra lehibe tokony hodinihina. Satria ity nosy ity dia manolotra fahafaha-manao maro antsika mba hahafahantsika manararaotra an'izany. Lasa latabatra izy io, ambonin-tany hanamboarana ny lovia ho antsika na ho mpizara efitra. Jereo bebe kokoa!
Avadiho ho lasa zaridaina an-tanàn-dehibe ny terrasinao na ny lavarangana
Manana lavarangana na terras miaraka amin'ny masoandro 5 ora ve ianao? Avy eo ianao dia afaka mieritreritra ny mamorona zaridaina an-tanàn-dehibe mba hamboly legioma, legioma ary hanitra anao manokana.
Zava-dehibe 5 amin'ny fanadiovanao lohataona
Izahay dia mampiseho aminao zavatra ilaina 5 amin'ny fanadiovana lohataona. Ny raharaha izay sarotra atao amin'ny fotoana hafa amin'ny taona ary hamelombelona ny tranontsika.
Fomba fanamboarana savony mora foana ho an'ny tranonao
Ny fanaovana savony ao an-trano dia tsy midika fahasarotana lehibe toa izao hitantsika izao. Sahinao ve ny manao savony voalohany?
Ny tombony sy fatiantoka amin'ny fandriana trundle
Ny farafara am-pandriana dia iray amin'ireo safidy voafidy indrindra amin'ny resaka fandokoana ny efitran'ireo zaza sy ny faralahy ao an-trano. Androany dia ho hitantsika ny tombony tsara indrindra nefa koa ny fanelingelenana hafa tokony ho fantatrao.
Antontan-taratasy lehibe ao an-trano: ahoana no handaminana azy ireo?
Betsaka ny taratasy manangona ao an-trano. Te hahafantatra ny fomba handaminana antontan-taratasy manokana, ara-bola ary amin'ny trano fonenana ve ianao?
Ahoana ny fomba fanadiovana parety
Satria tsy vitan'ny fanadiovana ilay parety ihany, izay efa fanamby, fa momba ny fikarakarana azy ihany koa. Mila izany haharitra ela kokoa noho izay azontsika eritreretina isika. Ka, tsy misy toy ny fanarahana torohevitra ilaina ary miaraka amin'izay, tena tsotra ampiharina.
Lakozia Ikea maoderina sy kanto
Hodinihinay ireo lakozia Ikea izay mamela antsika fomba maoderina sy kanto. Mikasika minimalist miaraka amin'ny famaranana loko sy gloss. Filokana lavorary ho an'ny karazana lakozia rehetra, na lehibe kokoa na kely kokoa. Jereo ny vaovao rehetra, satria hahagaga anao izy ireo!
Sobika Wicker, mpiara-miasa tsara handaminana ny tranonao
Ny sobika Wicker dia lasa mpiara-miasa tonga lafatra raha ny amin'ny fandaminana sy ny fitazonana ny efitrano rehetra ao an-tranonay milamina.
Anti-moka hiarovana antsika tsy hanaikitra!
Tonga ny voalohany ary miaraka aminy ny moka. Tsy sarotra ny miaro ny tranonao amin'ny manaikitra azy. Betsaka ny vahaolana fanoherana ny moka izay dinihintsika anio.
Ny fandaminana ny arimoara: tazomy amin'ny laoniny tsara ny akanjo
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fandaminana ny lalimoara isika: fitazonana akanjo tsara. Torohevitra sy tetika ho azy.
Karazana gorodona ao an-trano sy fikojakojana azy ireo
Ao amin'ny lahatsoratra an-trano androany dia mifantoka indrindra amin'ny karazana gorodona ao an-trano sy ny fikojakojana azy ireo izahay. Iza amin'ireo no hitanao fa tsara kokoa?
Fitaovana fototra hikarakarana ny zaridainanao
Misy fitaovana fototra mahatonga ny fikolokoloana ny zaridainanao ho mora sy mahazo aina kokoa. Te hahafantatra ve izy ireo ary inona no ilana azy?
Tsara ve ny miara-matory amin'ny biby fiompintsika?
Androany dia natokanay ho an'ny biby fiompinay kely ireo entana ao an-trano. Valiinay ny fanontaniana hoe tsara na tsia ny miara-matory amin'ny biby fiompinay.
Ny seza fitanana lamba sy hoditra dia madio foana!
Manangona loto maro ireo seza, noho izany ny fahazoana fahazarana fanadiovana dia ilaina hitazomana azy ireo amin'ny toerana mety indrindra mandritra ny fotoana lava.
Ahoana no hitazomana ny voankazo ho elaela kokoa?
Ao amin'ny lahatsoratray anio dia tonga izahay hanome anao toro-hevitra maromaro hitazomana ny voankazo ho lava kokoa.
Inona no fitaovana nofidiko ho an'ny latabatra lakozia?
Tsy mora foana ny misafidy ny fitaovana ho an'ny latabatra ao an-dakozia. Ny fampitahana ny toetra sy ny vidiny no lakilen'ny tsy fanaovana fahadisoana.
Boky fanoloran-kevitra 3 ho an'ny fikarakarana biby
Ao amin'ny lahatsoratray anio dia mifantoka amin'ireo biby kely tongotra efatra izay mandeha manodidina azy isika indraindray: saka sy alika.
Hevitra hanararaotana ny efitrano foana
Manana efitrano banga ao an-trano ve ianao ary tsy fantatrao izay hatao amin'izany? Izahay ao Bezzia dia manome hevitra anao izahay hanovana sy hampiasana azy ireo.
Efitrano fatoriana zaza aingam-panahy avy any Montessori
Ny fomba Montessori dia 100 taona fa ankehitriny. Raha mitady hamorona efitrano fatoriana zazakely entanin'ity fomba ity ianao, mankanesa aminay!
Fomba fanamboarana solo-dakozia ho an'ny tenantsika manokana
Amin'ity lahatsoratra natokana ho an'ny trano ity dia holazainay aminao ny fomba fanamboarana solo-dakozia ho an'ny tenanay. Hitahiry ireo vokatra fanadiovana ianao.
Hatsarao ny saka ny sakao ao an-trano
Amin'ity lahatsoratra ity momba ny trano sy ny biby fiompy dia lazainay aminao ny fomba hanatsarana ny fiadanan'ny saka ao an-trano. Ny torohevitr'ilay veterinera itokisanao no tena lehibe.
Mandidia ny pantryo arahana ny fomba FIFO
Ny fomba FIFO dia hanampy anao handamina ny pantry anao mba handanianao sakafo kely araka izay tratra. Mandrosoa ary ampiharo.
Ahoana ny fomba hisorohana ny saka tsy hikororoka toerana tsy ilaina
Ao amin'ny lahatsoratray anio dia milaza aminao ny fomba hisorohana ny saka tsy hikororoka toerana tsy ilaina sy ny antony ananan'izy ireo izany fahazarana izany.
Mitandrema amin'ny tolotra fa aza adala!
Ny tolotra dia maka fanahy antsika ary matetika isika dia mividy zavatra, mamela ny tenantsika hoentin'ny vidiny lafo. Ankehitriny dia omenay anao ny lakilen'ny fanararaotana tsara.
Torohevitra hitandrina ny fidianao
Te hanana endrika madio ve ny trano fidianao? Araho ny torohevitra izay arosonay anio hitandroana ny filaminana ao amin'ny trano fidiovana.
Fantatrao ve fa kivy koa ny biby fiompy?
Raha iray amin'ireo tsy nahalala ianao fa kivy koa ny biby fiompy amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao daholo izany. Fambara sy fomba fanamboarana ny olana.
Menaka oliva, safidy tsara hanome ity Krismasy ity
Ny menaka oliva dia safidy tsara omena amin'ny Krismasy. Fanomezana hafa fa miaraka amin'izay koa, mahasalama ary misy tsiro feno fomban-drazana.
Torohevitra hanavotana ity Krismasy ity
Mandritra ny Krismasy dia mitombo ny fandaniana amin'ny fianakaviana. Te hahafantatra ny fomba hitazonana azy ireo tsy ho afa-bela sy hamonjy ny Noely ve ianao? Topazo maso ireo torohevitra ao aminay.
Ahoana ny fanasana ny alikanao raha tsy mampiasa rano
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba fanasana ny alikanao raha tsy mampiasa rano sy ny antony maha-zava-dehibe ny hanaovana an'izany, raha ny hevitry ny mpitsabo biby.
Hevitra hiakanjo ny tranonao amin'ny Krismasy
Ho avy ny krismasy. Efa nieritreritra momba ny fomba hanomezana ny tranonao rivo-piainana Krismasy ve ianao? Manampy anao amin'ny tolo-kevitra samihafa izahay ao Bezzia.
Torohevitra handehanana mora kokoa
Ny drafitra dia lakilen'ny fivezivezena mora vidy ary noho izany dia hitsitsy amin'ny famandrihanao ny fialan-tsasatrao manaraka. Te hahafantatra ny tetika rehetra ve ianao?
Torohevitra fanadiovana bebe kokoa tianay ho fantatrao
Torohevitra fanadiovana bebe kokoa tianay ho fantatrao. Ireo dia somary voafaritra kokoa noho ireo izay matetika entinay anao. Enga anie hahasoa anao izy ireo!
Ahoana ny fomba hisorohana sy hanafoanana ny bobongolo ao amin'ny trano fidianao
Ny fahasamihafana amin'ny mari-pana, ny hamandoana ary ny fanondranana dia miteraka bobongolo ao amin'ny trano fidiovana. Hainao ve ny misoroka sy manadio azy?
Mieritreritra fanomezana Krismasy? Milamina
Tamin'ity taona ity tao Bezzia izahay dia nanapa-kevitra ny handamina ny tenanay mba tsy hanomboka mividy fanomezana Krismasy amin'ny minitra farany. Misoratra anarana?
Fitaovana fararano ho an'ny biby fiompinay
Amin'ity lahatsoratra Home and Pets androany dia tadidintsika ity farany: Fitaovana fararano ho an'ny biby fiompintsika. Aza avela hangatsiaka izy ireo.
Hevitra 4 handaminana kiraro
Ato amin'i Bezzia izahay dia mampiseho hevitra anao 4 anio mba hitazomana ny kiraronao voalamina ao anaty sy ivelan'ny arimoara. Vahaolana azo ampiharina sy ekonomika hahatratrarana azy.
Torohevitra hitehirizana rano ao an-trano
Mahita fepetra isan-karazany ho anao izahay anio any Bezzia hampihenana ny fanjifana rano ao an-trano ary amin'izany dia hitsitsy ny faktioranao
Aretina mahazatra amin'ny saka mihoatra ny 8 taona
Amin'ity lahatsoratra ity dia mitondra anao ny aretina mahazatra amin'ny saka mihoatra ny 8 taona izahay, ary koa ny soritr'aretin'izy ireo. Topazo maso tsara ny volonao.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny efijery solosaina sy fahitalavitra
Ao amin'ny Bezzia izahay dia te-hampiseho aminao ny fomba fanadiovana tsara ny efijery amin'ny solo-sainao, ny takelaka na ny fahitalavitra mba tsy hijaly izy ireo.
Hevitra handaminana fanasan-damba sy vy
Ny fandaminana ny fanasan-damba sy ny vy dia tsy mitsitsy angovo fotsiny, fa miaraka amin'ny fotoana koa. Manome anao hevitra vitsivitsy izahay hanatanterahana izany.
Fantatrao ve ireo fomba fitehirizana ireo?
Androany izahay mitondra lahatsoratra tena mahasoa ho an'ny rehetra. Ireo dia fomba fitehirizana 3 izay tokony ho fantatsika sy harahintsika rehetra.
Izahay dia manao tsaramaso jelly miaraka amin'i Peppa Pig ary milalao miaraka amin'Andriamatoa Ovy
Amin'ireto horonantsary roa an'ny Thermorecetas y Juguetitos ireto dia mianatra ny fomba fanaovana tsaramaso Jelly voajanahary miaraka amin'i Peppa Pig izahay ary milalao miaraka amin'Andriamatoa Ovy.
Dehumidifiers, mahazoa rivo-piainana voalanjalanja ao an-tranonao
Ny hamandoana be loatra dia miteraka fahasimban'ny trano sy fahasalamantsika. Manampy antsika hanafoana azy ny dehumidifier, fa fantatrao ve hoe iza no hividy?
Ny karazana alika 5 be fitiavana indrindra azontsika atao eo akaikiny
Ao amin'ny lahatsoratray momba ny trano sy ny biby fiompy anio dia lazainay aminao hoe inona ireo karazana alika 5 be fitiavana indrindra azonay atao eo akaikinay.
Torohevitra hikarakarana ny zaridainanao amin'ny ririnina
Mandritra ny ririnina dia miraharaha ny zaridaina isika. Na izany aza, ilaina ny fikolokoloana raha te hahita azy io amin'ny lohataona isika.
Fetsy fanadiovana tokony ho fantatrao
Ny tetika fanadiovanay izay tokony ho fantatrao dia manavao sy manitatra. Amin'ity indray mandeha ity izahay dia mitondra fanondroana vitsivitsy momba ny lakozia. Manao veloma ny tavy!
Fetsy mba hahatonga ny kiraronao ho madio sy lavorary
Androany, ao amin'ny lahatsoratray an-trano dia manome andian-tetika maromaro izahay hahatonga ny kiraronao ho madio sy lavorary. Tsy hanana fialan-tsiny intsony ianao.
Mikasa ny hankafy fialam-boly ao an-trano
Amin'ny ririnina dia manasa antsika ny toetr'andro handany fotoana bebe kokoa ao an-trano, izany no antony hanehoanay anao ao Bezzia drafitra hankafizanao fialamboly nefa tsy hiala ao an-trano.
Rafitra handaminana fako ao an-trano
Ny fandaminana ny fako dia mety hanjary aretin'andoha noho ny tsy fahampian'ny toerana. Manampy anao izahay amin'ny Bezzia amin'ny fampisehoana fiaraha-miasa tsotra sy madio.
Torohevitra momba ny fandaminana ny solosainao
Androany dia mamorona rakitra nomerika amin'ny hafainganam-pandeha haingana isika. Ao Bezzia izahay dia mampiseho torohevitra vitsivitsy handaminana azy ireo amin'ny solosainao.
Fitsipika momba ny fandaminana ny birao araka ny voalazan'i Marie Kondo
Ao amin'ny lahatsoratra an-trano anio dia mitondra andiam-pitsipika maromaro izahay handefasana ny latabatrao araka ny lazain'i Marie Kondo. Fantatrao ve ity mpanoratra Japoney ity?
Omano ny tranonao hianjera
Te-hamaly ny tranonao amin'ny fianjera manaraka ve ianao? Lazainay aminao ny fomba hanaovana izany amin'ny loko sy loko mety amin'ny fotoana.
Mofomamy ny mofomamy jiro!
Amin'ity fomba fahandro ity dia hampianarinay anao ny fomba fanaovana mofomamy vita amin'ny katsaka marefo, malefaka ary matsiro, mora atao ary miaraka amina famonoana sôkôla matsiro.
Lamaody an-trano ho an'ireo mpankafy Harry Potter ao amin'ny Primark
Androany, ao an-trano, dia atolotray anao ny lamaody an-trano ho an'ireo mpankafy Harry Potter izay amidin'ny rojo Irlanda Primark ankehitriny. Tianao ve ny tontolo majika?
Torohevitra hitsimbinana rehefa miverina mianatra
Boky, kojakojam-pianarana ... fivoahana lehibe ny fiverenana mody. Misy torohevitra vitsivitsy anefa afaka manampy anao hitahiry, hahafantatra azy ireo!
Torohevitra momba ny hetsika tsy misy korontana
Tsy mora ny hetsika, mavesatra izy ireo ary miteraka fihenjanana ho an'ny maro. Ao Bezzia izahay dia te-hahatanteraka ny fivezivezenao amin'ny toro-hevitra vitsivitsy.
Afaka miantoka ny biby fiompinao ny fiantoham-piaranao
Fantatrao ve fa afaka miantoka ny biby fiompinao ny fiantoham-pianakavianao? Raha mbola tsy fantatrao mazava tsara ny momba ny fiantohana fiantohana anao, vakio indray, dia hahagaga anao izany.
Hevitra handaminana ireo vatasarihana birao
Ao Bezzia izahay dia te-hanome anao hevitra tsotra sy mora handaminana ny vatasarihana latabatra mba hanatsarana ny vokatra.
Saosy voatabia miaraka amin'ny tuna ho an'ny paty
Betsaka ny fomba fahandro ny saosy voatabia misy tuna hohanina miaraka amin'ny paty. Ity karazana saosy ity dia iray amin'ny fahita matetika miaraka amin'ny spaghetti, macaroni ...
Ahoana no tsy hividianana vokatra fanadiovana be dia be
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome toro-hevitra maromaro momba ny fomba tsy hividianana vokatra fanadiovana be dia be izahay ary hitahiry vola kely amin'ny fividianana iray volana.
Ao amin'ny zaridaina, ahitra voajanahary na artifisialy?
Ahitra voajanahary na artifisialy ao amin'ny zaridaina? Asehonay anao ny tombony sy ny fatiantoka ny iray ary ny iray hafa hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra.
Ny maha-zava-dehibe ny fisafidianana kidoro tsara
Ny fitsenana amin'ny kidoro tsara dia misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fiainantsika. Noho izany ny safidy kidoro tsara dia tena zava-dehibe.
Fitsipika mandeha amin'ny alika amin'ny fahavaratra
Ireto ny sasany amin'ireo fitsipika fototra amin'ny fandehanana amin'ny alikao amin'ny fahavaratra. Aza aseho amin'ny hafanana ambony, tadidio fa tsy manana fihary hatsembohana izy ireo.
Fanalahidy handaminana fanafody ao an-trano
Ny fandaminana ireo fanafody ananantsika ao an-trano dia zava-dehibe kokoa noho izay eritreretintsika. Anio dia asehonay anao ny lakile hanaovana izany amin'ny fomba tsotra.
Torohevitra hitahiry rehefa manondraka ny zavamaniryo
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay anio ao Bezzis mba hitsaboana rano rehefa manondraka ireo zavamaniry ao amin'ny terrasinao na zaridainao ianao. Torohevitra tsotra sy mahomby.
Ahoana ny fitahirizana akanjo ririnina alohan'ny fahatongavan'ny fahavaratra?
Amin'ny fahatongavan'ny vanin-taona mafana, ny akanjo ririnina dia maka seza aoriana. Te hahafantatra ny fomba fitehirizana azy amin'ny fomba mety indrindra ve ianao?
Mitsitsia amin'ny fanamboarana savony fanasan-damba misy anao
Vonjeo amin'ity lahatsoratra ity amin'ny fanamboarana savony misy anao. Miaraka amin'ny fangaro kely sy vola kely dia ho afaka manana savony ranon-javatra mandritra ny iray volana mahery ianao.
Bathtub sa fandroana? Inona no safidy mety?
Mandro sa koveta? Fanontaniana iray mamely antsika rehefa mamorona trano fidiovana vaovao isika. Hos asehonay anao ny tombony sy ny fatiantoka ny roa tonta.
Ny 3R an'ny fanjifana tompon'andraikitra: ahena, ampiasaina indray ary avereno ampiasaina
Ny fampihenana, ny fampiasana indray ary ny fanodinana azy no 3R, lakilen'ny fihinanana maharitra sy tompon'andraikitra ao an-tranonay. Atoro anao anao ny zavatra!
Zavatra tsy azo banga ao an-tranonao mandritra ny fahavaratra
Androany dia lazainay aminao andiana zavatra izay tsy mety hanjavona ao an-tranonao mandritra ny fahavaratra: anti-moka, cubes, mpankafy sns.
Fanalahidy ho an'ny fikojakojana sy fanadiovana ny savily
Na dia vita amin'ny fitaovana maharitra aza izy ireo dia mitaky fikarakarana manokana ho an'ny fikolokoloana tsara. Atorinay anao!
Miaro saka sy alika amin'ny parasy, moka ary kongona
Ny famoahana ny alika sy ny saka any ivelany dia zava-dehibe indrindra mandritra ny fahavaratra, rehefa mivoaka avy amin'ny fahalainana ny parasy, ny kongona ary ny moka.
Fetsy hitazomana ny trano hangatsiaka amin'ny fahavaratra
Manomboka miditra ao an-tranonay ny hafanana. Ao Bezzia izahay dia te-hampiseho fika vitsivitsy hitazomana ny trano hangatsiaka amin'ny fahavaratra manaraka.
Torohevitra mahasoa hitahiry vola amin'ny fomba mahomby
Te-hihary vola kely isan'andro ve ianao? Izahay izao mitondra anao ny lakilen'ny fanatontosana azy tsy misy ezaka lehibe.
Torohevitra fitahirizana akanjo ririnina
Amin'ny lohataona dia maro amintsika no manao ny fanovana fitafiana. Ao Bezzia izahay dia te-hampiseho anao lakile vitsivitsy amin'ny fitehirizana akanjo ririnina.
Fahazarana 6 isan'andro hitandroana ny fahadiovan'ny trano
Nasehonay anao ny fahazarana 6 isan'andro hampiharinao hitandrina ny trano ho madio sy milamina, Fahazarana izay tsy hitondra anao mihoatra ny 10 minitra avy.
Fanadiovana: impiry manao azy io?
Tsy mahafinaritra ny lahatsoratra anio fa mety hahasoa be azy: "Fanadiovana: Impiry no hanaovana azy?". Eto izahay no milaza aminao.
Ny vola lany amin'ny vitsika, inona izany ary ahoana no fomba hifehezana azy ireo?
Ny fandaniam-bitsika dia fandaniam-bola madinidinika, tsy voamariky isan'andro, fa ny vola azony dia misy fiatraikany lehibe amin'ny volantsika.
Torohevitra handaminana ny vata fampangatsiahana
Ny fandaminana araka ny tokony ho izy ny sakafo ao anaty vata fampangatsiahana dia manampy amin'ny fitazonana azy amin'ny toe-javatra mety indrindra. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy
Fitaovana mahomby hamonjy angovo
Ny fitaovana mandeha amin'ny laoniny dia manampy antsika hitsitsy amin'ny faktioran-jiro. Atorinay anao ny fomba famakiana marika famantarana angovo.
Ny aretin-koditra mahazatra indrindra amin'ny alika
Amin'ity lahatsoratra momba ny biby anio ity dia asehonay amin'ny alika ny aretina mahazatra amin'ny hoditra: aretin-koditra, mange, dermatite ary allergy.
Ahoana ny fomba hisorohana ny soritr'aretin'ny saka parachute
Fantatrao ve ny aretin'ny saka parachute? Ny varavarankely sy ny dabilio azo antoka amin'ny harato dia tsy hianjera sy ratra ny saka anao.
Manaova akanjo milay tsara ao an-trano
Ny hoe mandany andro any an-trano dia tsy midika hoe tokony hahafoy tena isika. Ny fisafidianana akanjo an-trano tsara sy mahazo aina dia hanampy antsika amin'ny fahatokisantsika tena sy hamokatra.
Ny maha-zava-dehibe ny famoronana menio isan-kerinandro
Inona no hanintsika anio? Ny famoronana menio isan-kerinandro dia manampy antsika handamina tsara ny fividianana, fa tsy hanisy diso ny endriny ary hihinana amin'ny fomba voalanjalanja kokoa.
Manala ireo tasy penina marika amin'ny faritra rehetra
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba fanesorana tasy penina marika amin'ny faritra rehetra: porous, malama sy tsy porous, karipetra, sofa, rindrina, sns.
Ahoana ny fomba fanadiovana sy fanesorana fofona avy amin'ny karipetra
Mampiseho anao lakile vitsivitsy izahay hitandrina ny karipetra ao an-tranonao madio: rivotra, esory ary esory ny tasy rehefa mitranga izany.
Mividy isam-bolana na isan-kerinandro, iza no ahazoam-bola bebe kokoa?
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba ahafahantsika mitahiry kely kokoa amin'ny faran'ny volana amin'ny alàlan'ny fisafidianana karazana fividianana iray hafa: isam-bolana na isan-kerinandro.
Zavamaniry anaty trano izay manadio ny rivotra
NASA dia nanao fanadihadiana ary nanatsoaka hevitra fa misy zavamaniry anaty trano manampy amin'ny fanadiovana ny rivotra ao an-tranonay. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
Fanatsarana ny fampifanarahana ny fandroana amin'ny zokiolona
Asehonay anao any Bezzia ny fanatsarana atolotray hataon'izy ireo hanamboarana ny fandroana amin'ny zokiolona manana olana amin'ny fivezivezena.
Fetsy hitazomana ny lafaoro mba hadio
Ny fitazonana ny lafaoro ho madio dia zava-dehibe, fa fantatrao ve ny fomba fanaovana azy? Ao Bezzia izahay dia mampiseho aminao tetika fanao an-trano ho an'ity.
Fetsy manala volo saka ao an-trano
Ny saka dia very volo mandavantaona. Misy tetika maro hanalana ny volon'ny saka amin'ny karipetra, eo ambony lamba ary eo an-joro hafa. Atorinay anao izy ireo.
Torohevitra momba ny jiro mahomby: jiro voajanahary sy jiro voajanahary
Ps asehonay ireo torohevitra voalohany hahatratrarana jiro mahomby ao an-tranonao, araraotina ny jiro voajanahary ary fisafidianana ireo isa maivana.
Torohevitra 5 handaminana kabine ao an-dakozia
Nasehonay anao tao Bezzia toro-hevitra azo ampiharina dimy hampihatra ny toerana fitahirizana ao anaty fitoeram-bokinao.
Fetsy fanadiovana trano sy fandaminana tsy mety diso
Amin'ity lahatsoratra ity dia mitondra andiam-panadio trano sy fandaminana fandaminana tsy mety diso izahay: stain-penina, penina mikorontana sns.
Akanjo Halloween farany ho an'ny saka sy alika
Raha nilatsaka taminao i Halloween ary hatramin'ny fotoana farany tsy nieritreretanao fa afaka manaingo ny biby fiompinao koa ianao dia hanampy anao hialana amin'ny olana.
Ahoana no fanesorana tasy tsy azo atao?
Amin'ireny tetika fanadiovana ireny dia tsy handoa vola fotsiny ianao fa hitsitsy fotoana ihany koa. Ianaro ny fomba fanesorana ireo tasy tsy azo atao ireo.
Alika sa saka? Fantaro hoe iza no biby fiompy tsara indrindra ho anao
Raha te hahazo biby fiompy ianao ary tsy misafidy eo anelanelan'ny alika sy ny saka, anio dia te hanampy anao amin'ny farany izahay.
Ahoana ny fomba hitsitsiana an-trano amin'ny fomba mahomby
Tsy maharary ny mitsitsy raha amin'ny faran'ny volana dia maika kely isika, hahazoana izany, mila orinasa elektrika tsara ianao sy ireo fikafika ireo
Fahasamihafana eo amin'ny tia saka sy ny alika
Raha saka bebe kokoa ianao na raha alika bebe kokoa dia tohizo hatrany ny famakiana satria tianao ho fantatra ny tsy fitovian'ny toetra misy eo amin'ny olona miaraka amin'ny saka na alika.
Antony 8 handraisana ny biby fiompinao fa tsy hividy azy
Raha mieritreritra ny hanana biby fiompy ianao, dia mamporisika anao izahay hieritreritra ny handray alohan'ny hividianana. Io no safidy fangorahana indrindra.
Ny tombony azo amin'ny saka
Raha manana saka ianao dia mahatsapa fa tsara vintana ary raha tsy izany dia diniho ny fanananao. Jereo ny tombontsoa ara-psikolojika sy ara-batana rehetra ananan'ny biby toy ny biby.
Ny maha-zava-dehibe ny haingon-trano eo amin'ny fiainantsika
Ny vehivavy cosmopolitan rehetra dia tia manana trano voaravaka tsara, zava-dehibe ve ny haingo amin'ny fiainanao?
Ny mpanasa tongotra tsy mila herinaratra
Azonao an-tsaina ve ny milina fanasan-damba kely, ekolojika ary azo entina? Aza very tsipiriany satria mendrika hahitana azy, Drumi no iantsoana azy.
Saribakoly mangatsiaka haingo
Tianao ve ny saribakoly andiana sarimihetsika handravaka ny tranonao? Eny, ireo ho hitanao etsy ambany ... ho tianao izy ireo.
Hosodoko 3D gorodona mural
Te handravaka ny tranonao amin'ny fomba mahavariana ve ianao? Aza adino ireo sary hosodoko 3D ireo.
Mpihazona tavoahangy amin'ny hazo sy hoditra hitaterana bisikileta
Tompon'ny tavoahangy tsara tarehy vita amin'ny hazo sy hoditra ka rehefa mitondra divay amin'ny bisikileta ianao dia afaka manao azy amin'ny fomba kanto.
Latabatra mamirapiratra amin'ny alina
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny latabatra mahatalanjona iray izay mamirapiratra amin'ny alina, tsara ho an'ny barbecue-nao na fety amin'ny alina miaraka amin'ny namanao.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny seza maingoka maoderina sy mihoampampana. Tsara handravahana ny tranon'ireo tia an'ireny biby ireny.
Kiraro Chef fanontana voafetra »Bacon sy atody endasina»
ZAPOS dia nanamboatra kiraro manokana ho an'ny Chef. Ny kiraro "bacon sy atody" dia mety ho an'izay miasa ao an-dakozia na any amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny.
Globe an'ny bosoa
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay an'izao tontolo izao indrindra ianao satria afaka manidy ireo toerana nandehananao sy nonenananao teto ianao.
Ambainy mandro tsy mahazatra
Aza adino ny momba ny lambam-baravarankely mahazatra ary atsofohy amin'ny endrika tsy mahazatra izay tsy ho hitanao amin'ny toerana hafa ankoatry ny Internet.
Sakafo kely "mpamosavy" ho an'ny Halloween
Mpahazo sakafo ho an'ny Halloween izay hahagaga ny rehetra. Mora ny manamboatra azy ary tsy mila afa-tsy akora roa ianao vao manomboka ny "mpamosavy mpamosavy"
Fipoahana goavambe miendrika fonon-tànana ady totohondry
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay seza tsara ianao ho an'ireo tia ady totohondry. Fipoahana goavambe miendrika fonon-tànana ady totohondry hankafizanao amin'ireo fifaninanana ireo.
Lakilen'ny laser Star Wars
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay zavatra manokana ho an'ireo tia Star Wars ianao, fanalahidy sasany amin'ny fomban'ny sabatra laser, fitaovana tsy manam-paharoa.
"Bee Saver", kit vonjy taitra voalohany hitsimbinana ny tantely
Na dia mieritreritra aza izahay fa maty eo amin'ny asfalà ny tantely dia reraka fotsiny izany ary mila mamerina ny tanjaka. Manolotra anao gadget fampitaovana fanampiana voalohany ho an'ny tantely.
Fomba tsotra 6 hanalana tatoazy vonjimaika
Tsotra ny fanesorana tatoazy vonjimaika, hahita fomba enina mahomby hanafoanana azy haingana araka izay tratra isika.
Hamburger misy mofo mainty
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ireo burger mofo mainty mahaliana avy amin'ny trano fisakafoanana Burger King any Japon. Ity menio ity dia mahafinaritra araky ny fisakafoanana.
Sakafo Emoji: mihinana ny sakafo emoji 59 mandritra ny herinandro.
Misy emoji misy lohahevitra 59, sahinao ve ny manandrana ny tsirairay amin'izy ireo mandritra ny 7 andro? Hihaona amin'ny sakafo emoji vaovao ary talanjona.
Ny tongotra no teboka malemy amin'ny vatantsika. Noho io antony io dia mendrika fitsaboana manokana izy ireo hahafahan'izy ireo miala sasatra, izany no ampisehoanay anao ny fuut, fandriana mihantona manokana.
Tady amboa indroa
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fatorana alika miaraka amin'ny fitaovana tsy miankina iray isaky ny alika. Amin'izay dia tsy hikorontana izy ireo ary hahafinaritra ny mitaingina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia mampiseho fandriana manaitra sy manaitra izahay satria maneho ny akanim-borona.
Ohatra dimy amin'ny katsentsitra azo hanina ao an-dakozia
Na dia toa tsy mampino aza izany dia misy parasy fihinana izay heverin'ny olona maro ho matsiro. manomboka amin'ny tapeworms mba hanaovana paté ka hatrany amin'ny lampreys.
Kanto vita amin'ny tsaramaso kafe tany
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao izay azo atao rehefa misotro kafe. Tarehimarika kanto miaraka amina kafe an-tsokosoko avy amin'ny mpanakanto Liv Buranday
Sakafo 10 mety hahafaty ary lanintsika isan'andro
Lisitr'ireo sakafo 10 nohaninao isan'andro izay mety hahafaty raha tsy dia tsara ny fanomananao azy ireo na mihoatra ny fatra voatondro fotsiny.
Kitapo sy fonony avy ao amin'ny Zara Home
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny andiana lambam-pandriana sy fandriana ho an'ny efitranon'ilay marika Zara Home Fomba mahazatra sy sarobidy hitazana voajanahary.
Amboary ho an'ny lakozia ny takelaka fanapahanao
Ataovy namboarina ny takelaka fanapahana ho an'ny lakozia miaraka amina endriny azonao eritreretina. Ny Elysium Woodworks dia hanao ny sokitra safidinao na hisafidy iray amin'izy ireo.
"Kit" ho an'ny fanodinana alikaola alika ao an-trano amin'ny fitaovan'ny lakozia
"Prohibition Kit" dia kit ho an'ny fanodinana alikaola ao an-trano izay arakotra amin'ny fitaovana ao an-dakozia izay rehefa atambatra dia mamorona alembic.
Tavoahangy mahasoa ny tontolo iainana
Fanangonana tavoahangy rano ara-tontolo iainana vita amin'ny vera voajanahary sy tanany silika amin'ny loko pastel samihafa.
Antsy miloko, endrika vaovao ho an'ny antsy isan-karazany
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay antsy antsy vitsivitsy ianao hahafahanao manavao ao amin'ny lakozia ao an-dakozia anananao ao an-trano.
Miniature an'ny biby vita amin'ny crochet
Crochet biby kely mampiasa teknika isan-karazany
hevitra hanolorana ny omida amin'ny ankizy
fampiasana isan-karazany ny tsindry lamba: manomboka amin'ny akanjo ka hatramin'ny jiro ka hatramin'ny kilalao
DIY: Vary avana
ny fomba fanomanana vary avana
Ataovy izany: labozia tontolo iainana misy tangerine
ny fomba fanamboarana labozia avy amin'ny tangerine
Fantaro ireo karazana paoma efa misy
Ity tabilao ity dia mampiseho amintsika ireo karazana paoma eny an-tsena, ao no asehon'izy ireo amintsika raha ny karazana manokana ...
Mofomamy miendrika vagina
Satria tsy misy olona manohitra fety misy ireto mofomamy miendrika fivaviana ireto ary miteny hoe: «Androany aho ...
Sakafo voarara ho an'ny biby fiompinao
Izay rehetra manana biby fiompy dia hahafantatra fa, matetika, izy ireo dia "manontany" antsika amin'izay hohaninay ...
Solomaso Martini Giant
Raha efa te haka tahaka an'i Dita Von Teese ianao ary ny vera Martini goavambe dia mila ...
Biby fiompy fitsaboana
Efa tonga ao an-tsainao ve fa ny biby fiompinao dia marani-tsaina tokoa ka mila miresaka fotsiny izy? Y…
Mampiasà Alika V - Fahanana
Ny fanomezana sakafo ny namanao vaovao dia tena zava-dehibe. Mety ny manomboka mamahana ny alikao aminy ...
Ny biby fiompiko dia Guinea Pig (kisoa ginea)!
Ny ginea kisoa dia biby mpikiky teraka tany Amerika atsimo (però, colombia, venezoela) izay efa nompiana mihoatra ny ...
Kiraro sy kojakoja fanaovana sôkôla mafana
Nahita an'ity tranonkala ity aho, ary ny zavatra voalohany tokony hilazako aminao dia ny endriny mahafinaritra ...
Inona no hatao rehefa sendra lozam-pifamoivoizana ny biby fiompinao?
Torohevitra ankapobeny: Voalohany indrindra, milamina tsara. Ny zavatra voalohany dia ny mijery raha tsy mahatsiaro tena ilay biby. Raha toa ka…
Ny fiterahana ao anaty saka
Tompon'andraikitra izahay amin'ny fiantohana fa manaraka sakafon'ny mahasalama sy manankarena ny sakafonay ary, raha ilaina, mankanisa any amin'ny ...
Ny fomba fiaina mipetrapetraky ny saka
Raha ny saka miaina eny an-dalambe dia manana fe-potoana maharitra 2 ka hatramin'ny 4 taona, ny ...
Amin'ity lahatsoratra ity dia te hanome anao ny antony ilain'ny saka ny fantsika ary anisan'ny azy ireo ...
Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian